मिर्गौला रोगी अमृतलालको उपचारमा आर्थिक अभाव « Loktantrapost
मिर्गौला रोगी अमृतलालको उपचारमा आर्थिक अभाव
५ चैत्र २०७३, शनिबार १०:३५
धुलावारी । उनको नाम अमृत । उनको बोली सुन्यो र स्वभावको सङ्गत गर्यो भने त्यहाँ पनि अमृतकै अनुभूति हुन्छ । उनले सधैँ सकारात्मक लेखे । अर्थात अमृत लेखे । तर, अमृतमा पनि दैवको बक्रदृष्टि परेपछि कसको के लाग्छ र ? यहाँ भन्न खोजिएको कुरा साहित्यकार एवम् पत्रकार अमृतलाल श्रेष्ठको बारेमा हो । जो लामो समयदेखि मृगौला फेल भएको कारण बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
चार दशकभन्दा लामो पत्रकारिता गरेका झापाका अग्रज पत्रकार श्रेष्ठ यतिबेला मृत्युसँग यसकारण सङ्घर्ष गरिरहेका छन् कि उनले उपचारका लागि आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहनु परेको छ । ६ महिनादेखि उनको दुबै मृगौला फेल भएर उपचार भइरहेको छ । उपचार भन्नु पनि डायलासिस मात्रै ।
गत असोजमा विरामी भएर विर्तासिटी अस्पतालमा भर्ना भएपछि उनलाई त्यहाँबाट सोझै काठमाडौँको निदान अस्पतालमा लगिएको थियो । उक्त अस्पतालमा डाक्टरले उनको दुबै मृगौलाको खराबी पत्ता लगाएका थिए ।
केही दिन अघि अग्रज पत्रकार श्रेष्ठको मेचीनगर–१ स्थित धुलावारीमा रहेको घरमा लोकतन्त्रकर्मी पुग्दा आफ्ना पीडालाई उनले यसरी पोखे ।
‘मैले सरकारी सेवामा रहँदा पैसा र साथ सँगसँगै पाए तर, शरीरका दुबै मृगौला कामै नदिने गरी म थलिए पछि अब मेरो बिकल्प मृत्यु पर्खिनु बाहेक अर्काे विकल्प रहेन । चार दशकसम्म पत्रकारिता र साहित्यलाई सँगसँगै लिएर समाज परिवर्तनका सेवा गरेँ । तर, आज म मृत्युसँग लड्दै गर्दा साथ नपाउँदा दुःख लागेको छ ।’
उनले आफ्नो उपचारका लागि विभिन्न निकायमा सिफारिस गरे पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।
२०३२ सालदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका श्रेष्ठले २०४२ सालमा राष्ट्रिय समाचार समितिको कर्मचारीका रुपमा काम गर्न थालेका थिए । उनी २०७१ सालमा जागिरबाट सेवा निवृत्त भए । सेवाबाट निवृत्त भएका बखत पाएको केही रकम पनि उपचार गराउँदै सकिएपछि अहिले उनलाई चरम आर्थिक अभाव भएको छ ।
असोजदेखि उनी निरन्तर मृगौलाको डाइलासिस गराउँदै आएका छन् । हप्ताको दुई पटक डाइलासिस गराउनका लागि डाक्टरको सल्लाह भए पनि उनी रकम अभावकै कारण एक पटक मात्र गराउँछन् ।
विर्तासिटी अस्पताल विर्तामोडमा डाइलासिस गराउँदै आएका श्रेष्ठको हप्ताको ७ हजार खर्च हुने गरेको छ । अहिलेसम्म उनको उपचारमा ७ लाख भन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको छ ।
‘भएको रकम पनि सकियो’, श्रीमती निलु श्रेष्ठले भनिन्–‘अब आफुसँग उपचारका लागि पैसा पनि छैन, पतिलाई बचाउन पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ छाड्यो ।’
साहित्य र पत्रकारितालाई एकैसाथ लिएर अघि बढेका श्रेष्ठले यो उमेर आएर यस्तो दुर्दशा भोग्नु पर्दा दुःख लागेको बताए ।
‘उमेर भइन्जेल सक्दो गरियो’, श्रेष्ठले आफ्नो विगतलाई सम्झदैँ भने–‘अब उमेर पनि ढल्कँदै गयो, रोगले पनि झन झन च्याप्न थाल्यो । उपचारका लागि रकम समेत छैन । अब कसैले सहयोग गरेको खण्डमा मेरो जीवन रहला नत्र भन्न सकिन्न ।’
उनले मृगौला रोगीलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गराउने भने पनि झापामा यो सुविधा नभएकाले समस्या भएको बताए । आफ्नो उपचारका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।
२०१३ सालमा असार १ गते भक्तपुरमा जन्मिएका श्रेष्ठका २ भाई छोरा छन् ।
तत्कालीन धुलावारी गाउँ पञ्चायत कार्यालय २०३१ चैत्रदेखि २०३४ सम्म बहिदार र २०३४ चैत्रदेखि २०३६ भदौसम्म मुखिया तथा झापा वाणिज्य सङ्घ धुलावारी शाखा २०४० चैत्रदेखि २०४२ मङ्सिरसम्म कार्यालय सचिवको रुपमा काम गरेका थिए ।
२०४२ सालदेखि राष्ट्रिय समाचार समितिमा पत्रकारिता गरेका श्रेष्ठ २०७१ सालमा सेवा निवृत्त भएका थिए ।
उनले वार्ता साप्ताहिक (२०३४), सिद्धार्थ पाक्षिक (२०३६), संसार साप्ताहिक (२०३८) सिरेटो साप्ताहिक (२०३९) रासस (२०४२), शनिबार साप्ताहिक (२०४८) जन संसद दैनिक (अतिथि सम्पादक २०७१—२०७३) सम्म काम गरेका थिए ।
उनले ढुङगा माथि तरेलिएका फूल र पातहरु (कविता सङ्ग्रह २०४८), अन्तहिन यात्रा (कविता सङ्ग्रह २०५२), हुट्टियाउले आकाश थामेको देश (कविता सङ्ग्रह २०५६), क्यातुके फूल (कथा सङ्ग्रह २०६८), स्मृतिका ती दिनहरु ( संस्मरण सङ्ग्रह २०७१) प्रकाशन गरेका छन् ।
विभिन्न क्षेत्रबाट पुरस्कृत र सम्मानित भएका श्रेष्ठ दर्जनौ सङ्घ संस्थामा रहेर काम गरिसकेका छन् ।
नेपाली साहित्य विकास समिति झापाका संस्थापक सदस्य, महानन्द पुरस्कार समिति झापा अध्यक्ष, युवा साहित्य सङ्घ झापा अध्यक्ष, द रेयुकाई नेपाल भद्रपुर शाखा सल्लाहकार, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन झापा शाखा महासचिव, मनव अधिकार वातावरण तथा सामुदायिक विकास केन्द्र नेपाल झापा महासचिव, उपभोक्ता मञ्च नेपाल झापा महासचिव, नेवा पुचः धुलावारीका संस्थापक सचिव, प्रतिभा संरक्षण समिति धुलावारी संस्थापक सचिव, सासंक प्रतिष्ठान झापा धुलावारी संस्थापक सचिव, आयामेली लेखन २५ वर्ष समारोह समिति धुलावारी सचिव, ऐतिहासिक एवम् सामाजिक अनुसन्धान समिति धुलावारी सचिव, साहित्यिक पत्रकार सङ्घ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समिति विराटनगर संयोजक, त्रिफला साहित्य समाज धुलावारी सल्लाहकार, वाणी प्रकाशन सहकारी संस्था लि. विराटनगर सल्लाहकार, नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार सङ्घ झापा शाखा सल्लाहकार, समाज कल्याण सेवा क्लब धुलावारी सल्लाहकार, नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखा, धुलावारी जेसीजका अध्यक्ष भइसकेका छन् ।